5 Talooyin Waayo Socdaalka By tareenka In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Talooyin Waayo Socdaalka By tareenka In Europe
5 Talooyin Waayo Socdaalka By tareenka In Europe
by Niamh Waters
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo
(Last Updated On: 18/02/2020)
Arag iyo waayo-aragnimo si ka badan by bilaabin quudhin tareen Yurub. Ku safrid tareen ee Europe waa habka ka sugayeen for uunana socod Europe oo waa wax qarsoon ma sababta. The network rail waa aad u horumariyo si dadka safarka ah ka adkaan karaan dalal badan oo dhaqamo hal safar Tacaddi. Sida nooc kasta oo safarka, Waa wanaagsan tahay in aad naftaada diyaariyo si loo hubiyo in aad leedahay safar ugu fudud oo ugu xiiso leh suurto gal. Halkan waxaa noo 5 talooyin ah ee ku safraya tareen ee Europe.
Haddii aad Travel Kor 14 Maalmaha – Cilmi baas rail kala duwan
Haddii aad ku talajirto in aad aragto dalalka badan halka tareenka ee Europe safarka waxaa laga yaabaa in kuwa caqliga leh si ay u eegaan maalgashiga Pass Interrail ah, ama waxa aan aheyn muwaadiniinta EU ugu yeedhaan Eurail. An Interrail Pass ka dhigi doonaa safarka tareenka fudud. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay on a miisaaniyadda la adkeeyo, tigidhada shaqsi shaqayn kartaa jaban (gaar ahaan haddii aad inta badan u safraya bari ee Germany). Tixgeli miisaaniyada iyo cilmi qaar ka mid ah ka hor inta aad aad pass rail. Boggeena saveatrain.com waa meel ku fiican si ay u bilaabaan si ay u caawiyaan qorsheeyo aad safar guud ahaan Yurub.
Brussels si Tareenadu Cologne
Vienna si ay Tareenadu Cologne
Hanover in Tareenadu Cologne
Isku day inaad leenahay kuraasta aad
tigidhada tareenka iyo Boos kursiga waa laba wax oo kala duwan. tigidh A kuu ogolaanaya in aad fuulaysid tareen, iyo Boos aad damaanad kursi on tareen gaar ah. Ka hor safarkaaga hubi in aad fahamto in tareenka u baahan, talinaysaa, ama ma aqbali Boos kursiga.
Haddii ay suurtagal tahay, isku day in aad u leenahay, kursigaagu, gaar ahaan haddii aad u safraya dalalka About caan ah sida France, Italy ama Spain. Waayo, safarka ugu tareen ee Europe, looma baahna in aad u leenahay, kursigaagu, si kastaba ha ahaatee, hoydo tareenka quudarreynayana ugu fiican ma aha fikrad fiican. la sheegi karin in aad si aad u hesho baxay ee badhtamaha kursiga safarka haddii qof kale ayaa jaale. By kaydin aad meel, waxaad dooran kartaa in aad jeclaan lahayd in gamcihiisa ama suuqa kala kursiga ah. Waxaad dib u fariisan karo oo wuxuu ku raaxaysan ah tareen kortaan aad og in aan la kala gooyey doona inuu u dhaqaaqo.
Bologna si ay Tareenadu Rome
Ka dhig alaabtaada ammaan
Ku safrid tareen ee Europe waxaa loo yaqaan mid ka mid ah Habka ay u safraan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in isha ku hay for pickpocketers, gaar ahaan tareenada in ay joojiyaan in magaalooyinka waaweyn. Ha ka tegin boorsooyinka unguarded on tareenka ama in ka Idaacadda. on tareenada habeenkii, haddii aad doonayso in aad u seexato, xaqiiji si loo sugo Alaabtoodii in hayayaashii la qufulka a baaskiil yar. Si aad u leeyihiin nabadda ee maskaxda, xirtaan pack xidhnaa dhar aad hoos si aad baasaboor, phone iyo dokumenti kasta oo muhiim ah laga ilaaliyo wax kasta oo iman kara tuugo.
Luxembourg in Tareenadu Brussels
Antwerp in Tareenadu Brussels
Amsterdam si Tareenadu Brussels
Paris si ay Tareenadu Brussels
In ka yar waa ka badan – talooyin ah ee ku safraya tareen ee Europe
Going ka dalka dalka ama magaalo ilaa magaalo waa madadaalo iyo xiiso leh Safar ah. Si kastaba ha ahaatee, safarka noqon kartaa wax lagu daalo, haddii aad sidato load culus. Boorso daruuriga ah iyo ka tago wax kasta oo alaabta ama waxyaabaha aan ka dambeeya loo baahan yahay.
Iyada oo ku xidhan tareenka aad sodcaalka ku saabsan, waxaa jiri kara meel lagu kaydiyo kooban in ka badan uqaadi kartaa kursiga iyo armaajo oo markii u safraya tareen ee Europe. halkii siday boorso weyn oo culus, a boorsada miisaanka yar oo tayo leh waa qaab kale oo idinka Fudeyiyo, load.
Interlaken in Tareenadu Zurich
Luzern in Tareenadu Zurich
Bern si Tareenadu Zurich
Geneva in Tareenadu Zurich
Xir xirmooyinka saxda ah ee safarka safarka tareenka ee Yurub
Ku safrid tareen Yurub waxay bixisaa views cajiib ah; si kastaba ha ahaatee, waa fikrad wanaagsan in la keeno ah waxyaabaha muhiimka ah ee yar si ay u caawiyaan aad waqti gaar ahaan haddii aad bilaabin safar oo ka badan noqotay 2 saacadood. Akhri buug, watch a movie on kiniinkii, ku qor joornaalka safarka ama wada hadal ku dhufan la rakaab kale oo ka hor inta aadan ogaan in aad noqon doontaa meesha aad u socoto ee soo socota.
Brussels si Tareenadu Antwerp
Amsterdam si Tareenadu Antwerp
Lille si ay Tareenadu Antwerp
Paris si ay Tareenadu Antwerp
Tareenada badankood waxay leeyihiin makhaayad ama, gaadhifardood cafe ama gaadhi fudud in soo iibinta ismaris, cabitaannada fudud iyo ka badan. Laakiin haddii aad ku jirto miisaaniyad safarka dhagan ama aad qabto gaar ah shuruudaha cuntada, waa kuwa caqliga leh in ay keenaan fudud qaar ka mid ah kula on safarkaaga.
Fikirka ah ee safarka tareenka ee Europe? Tag Save Tareen A online si aad u hubiso soo baxay oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / es ama / de iyo luuqado badan.
talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka traveltips
Anigu waxaan ahay shaqo adag iyo shaqsi dareen leh oo sannado badan oo waayo aragnimo ah ee wax walba suuq digital iyo xiriirka dadweynaha. In ka badan tirada sanno ee u danbeysay, Waxaan ku soo kornay xirfadaha aan degaanka ee safarka iyo weliba sidaas darteed bilaabay qorista content si dadka ku raaxaysan karaan dunida ugu badan ee sida aan. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Tareenada Switzerland ayaa loo aqoonsaday kan ugu wanaagsan Yurub
Safarka tareenka, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe
Sida loo Travel Ammaan Inta lagu jiro dillaacay Coronavirus
Safarka tareenka, safarka Europe
10 Guryaha Isteek ee ugu Fiican Adduunka
12 Khiyaanooyinka Safarka ee Waaweyn Si Caalamka Looga Fogaado
10 Meelaha Ugu Fiican Khubarada Yurub
10 Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub
10 Astaamaha ugu caansan ee la booqdo